Namuhla, bonke abezindaba ngenkuthalo okuxoxwe amafutha esundu. Ubani ezama ukufakazela ukulimala kwakhe abathanda. Kodwa okokuqala kudingeka siqonde ukuthi ezimbili amamaki lamafutha kukhiqizwa. Ngenxa izintende ezikhulayo indawo - Afrika - kokubili izinhlobo abizwa ngokuthi ezishisayo. amafutha esundu, namafutha esundu ikhenela buyehluka kuye indlela yokukhiqiza. Ake sixoxe ngokuningiliziwe.
Kanjani ukuze uthole
amafutha esundu lwabelwe ezingeni lelisetulu ukumelana namachibi futhi rancidity. Iqukethe esilinganayo unsaturated okunamafutha acid kanye te. Khiqiza it kusukela ingxenye esithambile isithelo namafutha esundu.
Ukujula amafutha liqukethe carotenoid futhi palmitic acid. Udambisa at okushisa ngenhla 30 ° C. Abantu bendawo ukuyisebenzisa ukupheka.
Palmkernel uwoyela eyatholakala kusukela isithelo entendeni nuclei efanayo kuphela ngokucindezela. Ezweni lethu, lo mkhiqizo kabanzi insipho ekwenziweni (i yesivini ezinhle futhi kuyaqina), enkulu ekwakhekeni izimonyo yokugcoba yezokwelapha namakha.
Lapho Izihlahla zesundu?
izihlahla amafutha esundu sikhule mayelana 20 amamitha izithelo okusezingeni eliphezulu kanye emabhulashini, kufana kakhulu iplamu. Omunye ibhulashi - ke imayelana 800 izithelo, nesisindo 50 kg. Besuka komunye ehektheleni entendeni ipulazi uphendulela uwoyela izikhathi eziyisishiyagalombili ngaphezu ehektheleni yezwe ngaphansi sunflower. Khulisa kubo emasimini akhethekile e-India, Thailand, Indonesia, I-Afrika nakwamanye amazwe. I ekudayiseni lamafutha esundu namuhla - Malaysia.
Imiphumela yemivubukulo uqinisekise abacwaningi basikisela ukuthi la mafutha edliwe okhokho bethu eminyakeni acishe abe yizinkulungwane ezinhlanu ezedlule. Manje kusetshenziswa ukulungiswa ezihlukahlukene izitsha kazwelonke ka abakhileyo emazweni aseNtshonalanga Afrika.
Namafutha esundu ikhenela akuyona into kanzima kakhulu umbala ophuzi-mhlophe. Siqukethe 20% okunamafutha unsaturated acid kanye 80% ayegcwele. Ngakho-ke, akusiyo esiwusizo ngokukhethekile umzimba.
Namafutha esundu ikhenela ungaphakathi ukubunjwa ezihlukahlukene imikhiqizo, efana nokuzula ushokoledi, ice cream, imajarini, ukhilimu ezihlukahlukene. Amaphesenti nokuqukethwe kwalo kuzo zonke amagremu ayikhulu umkhiqizo curled umphumela wawo umzimba
Namafutha esundu ikhenela: enobungozi noma cha?
La mafutha esihlahla ubhekwa imvelo. Izazi zokudla bathi kufanele zifakwe yokudla komuntu omdala nsuku zonke. Afrika ziyadliwa izihlahla azikaze ziphathwe zinambuzane noma zinambuzane.
Naphezu izingxabano eziningi ngezinzuzo kanye nokulimala lamafutha esundu ikhenela, akekho ongaphika ukuthi iqukethe amafutha unsaturated% 20 kuphela, kuyilapho asele 80% igcwele triglyceride okuyinto babhekana kalula ukuze inqubo umzimba nangokunembile abathintekayo ekunciphiseni lipids "okubi" ivela ukudla. Ngenxa yalokho, uma isetshenziswa:
- kuthuthukisa impilo jikelele;
- ncono lizinga isikhumba nezinwele;
- anda ngezikhwepha ithambo izicubu.
Namafutha esundu ikhenela. izakhiwo
Kuyinto umthombo owusizo Antioxidants. Namafutha esundu ikhenela ithatha isikhundla tocotrienol okuqukethwe ehola - lesimcoka vitamin E. Ngokwesibonelo, nengcosana yamafutha esundu ekudleni sinikeza ukuvikelwa esihle ngokumelene emisebe yama-UV. Futhi, ungavumeli tocotrienols ukwakha zingcwecwe atherosclerotic, ikakhulukazi imithambo, futhi ikakhulu carotid, okuyinto kunciphisa ingozi yokushaywa unhlangothi.
A impahla elaziwayo elincane kodwa kahle ifundelwe uwoyela - ukumiswa yokuguga. Ukubamba iqhaza kule-beta-carotene unikeza namafutha esundu ikhenela luhlaza amakhulu abomvu. A carotenes, zonke ezaziwayo ukuthuthukisa acuity ezibukwayo, kuba nomphumela omuhle namasosha omzimba futhi izinqubo umzimba esikhumbeni futhi umzimba iyonke, ingasheshi ukuguga kwabo.
Namafutha esundu ikhenela iqukethe iphesenti eliphezulu Vitamin K. Le nethonya elihle igazi ekunqandeni.
Futhi izindaba olukhulu ucwaningo lwamuva - kule uwoyela lakanye amahwahwa enkomo Trans. Ngakho-ke, izazi zokudla cishe njalo kunconywa ukondla labo uhlushwa ukukhuluphala ngokweqile.
Namuhla, umuntu angabona ngokuvamile ukuzwa ukuthi amafutha esundu kuletha umonakalo kuphela, ngoba hydrogenated. Le nqubo yasungulwa ukuze ukungaguquguquki uketshezi we amafutha yemifino ukuthola okuqinile. La mafutha esihlahla Incibilikile ezingeni lokushisa kancane ngenhla ekamelweni lokushisa. Ngakho-ke inqubo akadingi hydrogenating.
Abaningi bakholelwa ukuthi amafutha esundu ibangela ukulimala. Kusolakala esiswini, kuvela odakeni. Yiqiniso, isitatimende ayilungile. Bacon, ushizi kanzima, futhi, musa zabaseGibithe ziphela amandla isisu. ukudla ukugaya senzeka ngaphansi kwethonya acid, kunokuba lokushisa.
Rumour has it ukuthi amafutha esundu akuvunyelwe ababhekene nazo emazweni asethuthukile. Empeleni, kuba kula mazwe futhi uthenge izinkulungwane zamathani uwoyela. Kuphela US ebangela kuka-10% emhlabeni ukusetshenziswa kwemikhiqizo ezishisayo.
Isicelo endaweni yokudla
Esebenzisa amafutha esundu? Isicelo endaweni yokudla kuvamile ikakhulu.
Ngezinzuzo noma ilimaze lamafutha esundu ikhenela baby ukudla are phikisana isikhathi eside. Iningi abacwaningi kanye izazi avumelane ngokuthi, ukudla okunjalo ubisi yengxenye tropical akufanele kube. Ezinganeni azinawo amafutha eqinile emathunjini entendeni ikhenela kuyingozi kakhulu. Ukungenisa evamile ifomula ubisi kwalo mkhiqizo okusongelayo miphumela kungenzeka:
- amajaqamba esiswini;
- akunasisekelo regurgitation;
- ukuqunjelwa Sinzima;
- leaching-calcium kusuka umzimba wengane;
- mhlawumbe ngisho nokubonakala kokungqubuzana kwencika (nethonya elilimazayo isimiso sezinzwa ingane).
La mafutha esihlahla ezishisayo Kunconywa kwasekuqaleni, ukwenza i-vitamin A emzimbeni. Ikakhulukazi izingane nabesifazane isimo.
Namafutha esundu ikhenela isetshenziswa embonini ukudla:
- Ukukhiqizwa ngesisekelo the oilseed (wezipuni ibhotela, lisakazeka, margarine);
- ukwenziwa ushizi kusetshenzwe;
- ukwanda ngokuya yokuthengisa (isitoreji) imikhiqizo.
Okunye embodiments zisebenzisa amafutha
Futhi-ke isetshenziswa okukhipha ukusetshenziswa yezimonyo (insipho, okhilimu, lotions) ekudleni, kuboniswa ngenxa ukulawula umfutho wegazi, lokuvikela umdlavuza, esimweni ekulweni ukukhuluphala futhi ukuphazamiseka kwemizwa nangokwengqondo.
Namafutha esundu ikhenela ngokuvamile sisetshenziswa salon, noma wenze ukubhucungwa naye ekhaya. Isetshenziselwa njengesilwane izindlela ezimele for massage noma 1:10 nezinye izingxenye okunamafutha.
Ngezinye izikhathi kuhlanganisa aromakompozitsii, kokunezela kulo lo amafutha abalulekile ezinconywe udokotela ukuba khona.
Abesifazane abaningi beauticians ukuncoma la mafutha tropical for ukunakekelwa ebusweni kwesikhumba kanye umzimba. Kuyinto efiselekayo ukuthola e drugstores noma okukhethekile ezitolo, hhayi ukusebenzisa ku-mbumbulu. Ukubuyisela kuyaqina, hydration kanye nokudla kwesikhumba kwanoma iyiphi ingxenye yomzimba, emva eshaweni noma ukugeza imali encane yamafutha sisetshenziswa iphuzu nokunyakaza isiyingi, wagcoba esikhunjeni. Ukuze kungenzeka ngalezi zinhloso esetshenziswa njengoba ithuluzi ngokwayo futhi abe ingxube kwezindlu kusekelwe kuyo, ukungeza, isibonelo, alimondi, zamapetshisi, uwoyela kakhukhunathi noma ukwatapheya grapeseed.
Estheticians ukwamukela izicelo futhi ukwakhiwa buso esekelwe amafutha esundu ikhenela. Ofakwe ingxube ka amafutha abesesula ukuphoqelela ezindaweni inkinga imizuzu 15-20. Ukwenza inkambo izinqubo ezinjalo.
Futhi okuhle ku tropical uwoyela phendula curls. I namafutha izinwele (1:10) ukuba angenelele uwoyela. ukunyakaza Mnene ukukuthinta ku izinwele kanye ekhanda, kugeze kahle. Abanye abantu bakuncome lokhu remedy wagcoba ku plate nail.
Harmlessness lamafutha esundu ikhenela
amafutha Tropical entendeni Afrika kubhekwa uphephile ngaphansi ngemithamo Kunconywa nokuthatha akukho kuka izinyanga eziyisithupha. Libuye aphephile amafutha esundu emikhiqizweni (ice cream, imajarini, lisakazeka, ushokoledi).
Kungaba yingozi kwezinye izimo. Ngokwesibonelo, lapho ukuthosa noma esetshenziselwa salads.
Ngingayithola ukwengeza ashisayo Itiye uju? Zonke "kochwepheshe" futhi "nebubi"
Sikadali "Ketha": umkhiqizi kanye nokubuyekeza
"Port Aventura", "Shambala" - izifele onesibindi
Izimpawu indoda ngothando imithetho Uthando-zokuxilonga
Kungani ushizi okumnandi kangaka Kobryn?
Eliphezulu metal - ebeka izandla
Jennifer Armintrout, incwadi "Obsidian": uhlobo, nabalingiswa abasemqoka, ukubuyekezwa
Umkhosi Cishe brilliant nge ukunambitheka ehlobo
Pancake nge salmon
Usuku itilosi we Navy we Russian Federation: umlando lomkhosi
Indlela ulungiselele "Bandikam" ukuthi abezwile lokho engakukhuluma kubo nomngani